10 Misiyano Pakati peClassic neSocial Media Kushambadzira | Martech Zone
Paari kushambadzira blog, Robert Weller akapfupikisa iyo gumi misiyano mikuru pakati peyakajairika uye yekushambadzira midhiya kubva mubhuku raThomas Schenke Yemagariro Media Kushambadzira und Recht Muizvi infographic.
Rondedzero yacho yakazara, ichipa zvakanakira kumhanya, chimiro, kusingaperi, mapuratifomu, mutemo, gwara, uye zvekutaurirana zvivakwa. Kune akawanda echinyakare ekushambadzira madhairekita ari kushanda mumakambani mazuva ano izvo zvisati zvaziva mutsauko kana kunzwisisa zvakanakira - ndinovimba iyi infographic inobatsira kuratidza zvakakosha zvinhu.
Tags: kushambadzira kwechinyakareinfographicRobert Wellerpasocial media yaitwa nemazvopasocial media und rechtthomas schenketoushenneelso.ne
Gumiguru 16, 2013 pa 8:58 AM
chekutanga ndinokutendai zvikuru nekugovera yangu infographic, ndinofara kuti mazviona zvichibatsira!
Chechipiri, ndangoigadzirisa kuti iwedzere kunakidza. Ndine urombo nekusakanganisa 😉 Iwe uchawana vhezheni 2 pane yangu blog (same link yawakashandisa muchinyorwa chako).
Gumiguru 16, 2013 na1: 41 PM
Fantastic! Yakagadziridzwa - ndatenda zvikuru Robert.
Gumiguru 16, 2013 na4: 28 PM
10 Misiyano Pakati peClassic uye Social Media Marketing- ichi chinyorwa chakanaka. Isu dzimwe nguva tichitsvaga Musiyano Pakati peClassic uye Social Media Marketing, uye heino mhinduro. Ndatenda
Inobatsira kwazvo infographic… (nereferensi ofc) ndiri kuishandisa sehurukuro yangu. Thanks zvikuru!
Nov 28, 2016 na10:11 PM
Kuenzanisa kunonakidza kwazvo pamusoro pekutanga kushambadzira uye kushambadzira kwedhijitari. Neinternet, tinogona kushandisa yakaderera bhajeti uye kuwana mibairo yakafanana. Ndatenda nekugovana.